Aaron Ramsey oo ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee kooxda Arsenal iyo Macallin Unai Emery oo ka hadlay – Gool FM
Aaron Ramsey oo ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee kooxda Arsenal iyo Macallin Unai Emery oo ka hadlay
(London) 01 May 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal, Aaron Ramsey ayaa la soo sheegayaa inuu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee Gunners, isagoo aanu wax fursad ah u haysan inuu markale matalo kooxda reer London ka hor dhammaadka xilli ciyaareedkan.
28-sano jirkaan ayaa dhaawacmay intii lagu guda jiray kulankii ay Gunners 1-0 kaga adkaatay naadiga Napoli kaasoo dhacay 18 bishii hore ee April, tan iyo markaasna garoomada kama soo muuqan oo waxa uu la maqnaa dhaawac dhanka muruqa ah.
Tababare Unai Emery ayaa ku rajo weynaa inuu Ramsey u ciyaari doono markale xilli ciyaareedkan haddii ay Arsenal gaarto final-ka tartanka Europa League kaasoo ka dhici doona magaalada Baku dhammaadka bishaan, laakiin macallinka Gunners waxa uu hadda xaqiijiyey Aaron Ramsey uu garoomada kaga maqnaan doono dhaawac muruqa ah inta ka dhiman kal ciyaareedkan.
Dhinaca kale Wargeyska The Sun ayaa warinaya in kooxda Juventus aysan ciyaaryahankan khadka dhexe u ogolaan doonin fursad uu ku macsalaameeyo taageerayaasha Arsenal, maxaa yeelay qubaro ayaa u sheegay Juve in xiddigan uu qabo dhaawac halis ah, isla markaana uu iminka ku jiro soo kabasho, haddii uu ciyaarana laga yaabo inuu dhaawacaas dib ugu laabto.
Ramsey, kaasoo ka tagaya garoonka Emirates bisha soo socota kaddib 11 sanadood oo uu ku sugnaa kuna biiraya Juventus ayaa haatanba ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee kooxda Arsenal, markalena dib uma xiran doono oo uma dheeli doono Gunners inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer Wales ee Ramsey ayaa sidoo kale shaki laga galinayaa kulamada isreeb-reebka ee xulkiisu wajahayo xulalka Croatia iyo Hungary bisha June ee soo aaddan.
Real Madrid oo doonaysa inay la wareego laacibka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba, laakiin waa haddii…
Ka hor kulanka caawa Barcelona vs Liverpool, waa sidee rikoorka uu Lionel Messi ka haysto kooxaha Premier League?